Izikebhe zezimoto zamakhosikazi eziphathekayo zonyaka wama-2016. Amamodeli wangempela ama-raincoats wesifazane ngo-2016, isithombe.
Izingubo akuzona inkathi yokuqala ziphakathi kwezingubo zentwasahlobo ethandwa kakhulu. Kulo nyaka, abaklami bezemfashini abakhulu baphinde bathethele kulo mfanelo osebenzayo futhi elula wesigqoko sesigqoko samakhosikazi, esithandwa kakhulu kuma-70. Yiqiniso, ukubonakala kwezinto ezintsha kanye nokuguqulwa kokugcizelela ekubukeni kwezingubo zokugqoka kwangaphandle kwakuthonya kakhulu izinqumo zokuklama futhi baphuthukisa kancane ngisho namamodeli ezinhlobo zemvula. Ngakho-ke izihlobo zemvula zezimvula zizothandwa kanjani ngo-2016? Phakathi kwemikhuba yezimfashini eziyinhloko kungabonakala izindawo eziningana.
Izingubo zentwasahlobo ezenza imfashini 2016: ukubuka ngokuningiliziwe kwamamodeli amanje kakhulu
Ngentwasahlobo ka-2016, izembatho zakudala ezinomfanekiso oqondile nangaphezulu noma amapokhethi asetshenziselwe ukuvikela indawo yokuqala ekuthandeni. Ungabaniki ama-a-to-date nama-coated coats nge-epaulettes, ukusika kusukela ngemuva kanye nezinkinobho kumigqa emibili. Abadwebi befashini abazange bashintshe umdwebo wesifazane, ngakho banikela ukugqoka i-raincoat yakudala kuphela nebhande eligcizelela isiqhwa. Isithombe sangempela sehlobo se-spring singadalwa ngokuhlanganisa i-raincoat yama-classic enezikhunta ezifashisayo zale nkathi, amasitokisi, izicathulo kanye nezikhumba zama-ankle ezintendeni eziphakeme zesikwele.
Yimaphi ama-raincoats asemfashini entwasahlobo ka-2016, isithombe
Izingubo zesikhumba zitholakala 2016 - isithombe sesifazane
Okuthandwayo okunjalo ezikhathini ezedlule, ama-raincoats kanye nama-ponchos kulo nyaka entwasahlobo uzobuyela ngemuva futhi ahlinzekele izikhundla zabo eziphathekayo ezingenakuzithoba kanye nezindlela ezisebenzayo - izikebhe zemvula. Lezi zingubo ezingenakuzithoba zefomu elivulekile nemikhono emikhulu efana neyodwa enye imodeli zifanelekile ngesimo sezulu esentwasahlobo esishintshayo. Zivikela ngokuthembekile emelene nemimoya nemvula, futhi esimweni sezulu esishisayo singasebenza njengesici sokuqala esithombeni. Kule nkathi abadwebi baye bafeza i-raincoat-raincoat futhi manje ngisho nangaphandle le modeli ibheka ngokwengeziwe futhi inhle kakhulu.
Izikebhe zamanzi zonyaka Spring 2016: izinto zokwakha imidwebo, imibala nemifanekiso
I-spring engenakuqhathaniswa ngaphandle kwe-raincoat elula noma i-raincoat, kuyasiza ukuba nezinketho ezimbalwa ezifudumele kule ikhabethe. Kule nkathi, ungathola kalula ijazi lesikhumba, i-suede noma izinto zokwakha, isibonelo, i-polyester. Kulungile uma imodeli oyikhethayo iyinhlangano enobuchopho noma ifakwe ngendwangu yangaphakathi yeholofayber. Imfashini izoba izembatho zama-dense denim kanye nezindwangu eziboshiwe.
Izintandokazi ezingenakunqunywa zika-2016 zizoba yizingubo zombala wombala wombala. Empeleni kuzoba njengobunzima obumnyama (obumnyama, obomvu, obomvu obomvu, obomvu), nemibala ekhanyayo (ophuzi, obomvu, obuluhlaza, obuluhlaza, obomvu). Futhi, abaklami babeveze izingubo eziningi zembala ekhanyayo: ezimhlophe, beige, ezimpunga ezikhanyayo, njll.
Ngokuqondene nemifino, entwasahlobo ka-2016 onobuhle nge-geometric ne-flower prints izobe isithandwa kakhulu. I-cage nama-peas nazo ziphakathi kwezintandokazi zasentwasahlobo kulo nyaka. Ukulethwa ngamaqoqo amafashini ama-raincoats wesifazane anezinhlamvu zezilwane, isibonelo, ukulingisa isikhumba senyoka noma umbala we ingwe.
I-Chic yase-Australia: I-Seafolly Beach Collection
Izinto zangaphandle zokuqedela: izinhlobo nemithetho yokuzikhethela
Iresiphi esiphundu: i-ithanga ipayipi ne-meringue
Ipayipi iphariji ku-multivariate
I-Macaroni isaladi ngezinhlanzi ezibhemayo
Amagciwane Omuthi Wegazi Sikashukela
Izimpawu zesisu esishukunyiswe ingane
Ukunakekela ingane ngokuthinta
Inkukhu epejiwe nge pepper elimnandi